प्रश्न साँझ सबै
1 वर्ष6महिना पहिले #924 by mickod88
बेलुका साथी सिमरहरू !!
6 महिना भन्दा बढि Rikoooo मा अब एक सदस्य बन्नुभयो, अन्ततः मेरो परिचय गराउन गोलो भयो किनकि म धेरै टाढा छैन अब केही राम्रो प्राप्त गर्न सक्दछु। P3D मेरो बेल्ट अन्तर्गत फेरि समय!
मेरो नाम मिक हो, र म स्कटल्याण्डको लोसीमथको हुँ, वर्तमानमा आरएएफको साथ एभियोनिक्स टेक्निशियनको रूपमा सेवा गर्दैछु। यसको बारेमा धेरै सिक्न अगाडि हेर्दै P3D सब भन्दा अनुभवी र आशा बाट मेरो ज्ञान भविष्यमा अन्य newbies लाई दिनुहोस्।
1 वर्ष6महिना पहिले - 1 वर्ष6महिना पहिले #925 by rikoooo
फोरममा स्वागत छ, तपाईलाई परिचय गराउनुभएकोमा धन्यवाद।
म आशा गर्दछु कि तपाईले यो फोरमको आनन्द लिनुहुनेछ, सम्पूर्ण फोरम नया छ र केहि गतिविधिहरु चाहिन्छ त्यसैले कृपया यहाँ पोष्ट गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र आफ्नो बहुमूल्य ज्ञान अरुलाई पुर्‍याउनुहोस्।
1 वर्ष6महिना पहिले #926 by Gh0stRider203
ए, म त्यो दोस्रो! स्वागत छ, र तपाईको सेवा को लागी धन्यवाद!